Methyltrienolone powder (965-93-5) Abenzi Nabahlinzeki - Amafektri
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)
I-Methyltrienolone powder ingenye ye-steroids engcono kakhulu yokuhlukunyezwa kwesisu. I-trentholone yamethini iyimisipha ephezulu yokuthuthukisa imikhiqizo. I-Metribolone ingenye ye-anabolic steroids yomlomo eqinile kunazo zonke ezakhiwe.
I-Raw Methyltrienolone powder (ividiyo ye-965-93-5)
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Incazelo
I-Raw Methyltrienolone powder i-anabolic-androgen steroid esebenzayo ngomlomo ibe yi-17α-alkylated nandrolone (i-19-nortestosterone) etholakala. Ayithengiswa njengedakamizwa yesidakamizwa kanye ne-supplementary dietary ngenxa yemiphumela emibi ye-androgenic nesifo sobindi. Kodwa-ke, kuvame ukusetshenziswa njengendawo yokukhomba yokusebenza kwe-in vitro yezinto eziphilayo ezihlolisweni zemvelo. Ingakwazi ukubopha ngokuqinile kwi-androgen receptor futhi ingasetshenziswa njengelebula elihlangene le-receptor ye-androgen ku-prostate nasezikhwameni zesisu.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuthatha i-steroid yomlomo we-anabolic ngokudla kunganciphisa ukutholakala kwayo. Lokhu kubangelwa uhlobo lwe-fat-soluble lwama-hormone e-steroid, okungavumela ezinye izidakamizwa ukuba zichithe ngamafutha angenayo okungavamile, ukunciphisa ukumuncwa kwayo emathangeni omzimba. Ukuze uthole ukusetshenziswa okuphezulu, ama-Raw Methyltrienolone powder kufanele athathwe esiswini esingenalutho.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Siziqu
Igama Product I-Raw Methyltrienolone powder
Igama leKhemikhali I-METRIBOLONE; I-Methyltrienone; I-17A-METHYL-TRENBOLONE; I-Metribolone; i-Methyltrenbolone (i-Metribolone)
Brand NAme I-Raw Methyltrienolone powder
I-Drug Class I-Steroids; Abathintekayo & Amakhemikhali Ahle; Izidakamizwa; uchungechunge lwe-trenbolone
CAS Inombolo 965-93-5
I-molecular Fi-ormula C19H24O2
I-molecular Weziyisishiyagalombili 284.39
IMisa ye-Monoisotopic I-284.178 g / mol
Ukuxuba Pi-oint 170 °
Ukubilisa Pi-oint I-485.9 ± 45.0 ° C ku-760 mmHg
Color ukukhanya okuphuzi okuphuzi
Sukufaneleka I-DMSO: ≥10mg / mL
I-Raw Methyltrienolone powder Aukuphikisana isetshenziswe njengendlela yokubhekisela ekusebenzeni kwe-in vitro biological for biochemical studies. Ingakwazi ukubopha ngokuqinile ku-receptor ye-androgen futhi ingasetshenziswa njengelebula elihlangene le-receptor ye-androgen ku-prostate nasezikhwameni zesisu.
Iyini i-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5)?
I-Methyltrienolone ingenye ye-anabolic steroids yomlomo eqinile kunazo zonke ezakhiwe. Le-ejenti yi-deribative ye-trenbolone (trienolone), okuyi-c-17 alpha alkylated ukuvumela ukuphathwa ngomlomo. Lokhu kuguqulwa kuye kwakha i-steroid enamandla kakhulu kunomzala wayo ongenayo i-methylated. I-potency yayo iye yalinganiswa ukuba ibe yikuphi okuvela ku-120-300 izikhathi eziphakeme kunaleyo ye-methyltestosterone, ngokuhlukaniswa okukhulu phakathi kwe-anabolic nemiphumela ye-androgenic. I-535 536 Milligram ye-milligram methyltrienolone iyi-steroid esebenzayo kunanoma iyiphi i-ejenti edayiswa emakethe yezohwebo, edinga amanani okungenani nje .5-1 milligram ngosuku ukubona umphumela onamandla we-anabolic. I-potency yayo ihambelana nokudla okwejwayelekile, noma kunjalo, okuye kwalinganisa ukusetshenziswa kwayo kwansuku zonke kwaleyo yocwaningo lwama-laboratory kuphela.
Umshini we-Methyltrienolone powder (965-93-5) osebenzayo
I-Methyltrienolone, ngemva kokuba i-metabolized by acids acids ifika ne-androgen receptors futhi iboshelwe ngokuqinile nayo. I-Androgens ngokuyinhloko i-hormone yesilisa eyisibopho sokukhiqiza imiphumela ye-anabolic. Qaphela lapha ukuthi ithuluzi eliyinhloko eliza lawa mahomoni adala lezi zinhlobo ze-anabolic yi-receptors ye-androgen. Zivuselela izakhi zofuzo eziningana eziholela ekukhuleni emasimini kanye namandla.
I-testosterone (enye ye-androgens eminingi) yi-hormone eyinhloko ebangela ukukhula komzimba wakho nokulungisa. I-Androgen receptors iqinisekisa ukuthi umzimba uphendula ngokufanelekile kule hormone eyimfihlo. I-testosterone ibopha nalezi zitholampilo futhi ifinyelela amangqamuzana omzimba wamasipha lapho idlala indima yayo.
I-Methyltrienolone, ngokubophezela ngokuqinile nge-receptors ye-androgen, isiza ukubeka imiphumela ye-testosterone, ngaleyo ndlela ibe lula ekuzuzeni ubukhulu bemisipha namandla.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Isilinganiso
Ochwepheshe batusa ukuthi uthathe amanani aphansi ale steroid anabolic. Uhlu oluphumelelayo kakhulu lubhekwa ukuthi luphakathi kwe-0.5mg kuya ku-2mg. Umthamo kufanele uhlukaniswe izingxenye ze-3-4 ngesilinganiso esisodwa esithathwe ngamahora angu-1.5 ngaphambi kokuzivocavoca. Njengoba kukhulunywe ngaphambili, i-methyltrienolone yisidakamizwa esinamandla kakhulu nokugqweba ngokweqile kuyo kungabangela umonakalo omkhulu empilweni yakho. Ngakho-ke, gcina amanani akho aphansi futhi imijikelezo yakho ifushane. Ubude obujwayelekile bomjikelezo we-methyltrienolone yizingu-6-8. Noma kunjalo, kubaqalayo, kunconywa ukuba ugcine isikhathi esifushane sokuthi umjikelezo wesikhashana ube yisikhathi samasonto e-4 noma ngaphansi.
Ucwaningo lwembula ukuthi ukuthatha i-methyltrienolone ngokudla kunganciphisa ukutholakala kwe-bioavailability okusho ukuthi kunganciphisa ukumuncwa kwezakhi zomzimba emzimbeni wakho. Amanoni angadli ngokudla okubangelwa ukunciphisa ukutholakala kwegazi angabe esevimbela imiphumela ye-anabolic yalesi steroid. Ngakho-ke, ukuze sithole inzuzo enkulu, singakukwazisa ukuthi uyithatha esiswini esingenalutho.
I-Raw Methyltrienolone powder (965-93-5) Ukusetshenziswa
I-Methyltrienolone ingenye ye-anabolic steroid eqine kakhulu enezinzuzo eziningi. Nasi uhlu lwezinzuzo ezinkulu ozothola ngesikhathi uhamba ngebhayisikili nalesi sidakamizwa:
(I-1) Akusikhiphi. Lokhu kusho ukuthi akuguquki ku-estrogen. Phawula lapha ukuthi i-estrogen yi-hormone eveza ibele, futhi ilawula umjikelezo wesisindo nokuzala okubesifazane. Ngakho ama-hormone aguqula i-estrogen angase akhokhele ku-gynecomastia okungukuthi amabele akhulisiwe emadodeni. Ngaphezu kwalokho, amazinga aphezulu e-estrogen emzimbeni angabangela nezifo zenhliziyo nomdlavuza wesifo sofuba. Kodwa akudingeki ukhathazeke ngoba ngenkathi uhamba ngebhayisikili nalesi sidakamizwa uphephile kukho konke lokhu njengoba kungaguquki ku-estrogen.
(2) Njengoba ingaguquki ku-estrogen, igcina umzimba womsebenzisi uphephile ekugcinweni kwamanzi ngokuqeda amanzi angafuneki emzimbeni. Ngakho-ke, ungayisebenzisa ngesikhathi sokudla noma ngenkathi ulungiselela imincintiswano.
(3) It ngokuphawulekayo Ukwandisa ubulukhuni muscle. Lokhu akuwona wonke ama-anabolic steroids akwazi ukwenza. Ama-steroids amaningi abonisa ukunyuka okuphawulekayo ekuzuzeni kwe-muscle kodwa bambalwa kakhulu okuholela ekukhulekeni kwemisipha kanye nawo. I-Methyltrienolone yilokho i-steroid eyodwa eqinisekisa ukuqina kobunzima obunikeza umzimba wakho ukwakha ukubukeka okunamandla.
(4) Uzothola ukwanda okukhulu kwamandla ngenkathi uhamba ngebhayisikili nale steroid. Kuzokusiza phakathi nemihlangano yakho yokuzivocavoca ngokukhulisa amandla akho namandla. Ngakho uzokwazi ukuqeqesha isikhathi eside futhi kaningi.
(I-5) Yandisa ubuchopho. Ukuba ngumdlali noma umgqugquzeli womzimba, ngokuqinisekile ufuna imifino evelele, ebonakalayo ukuze unikeze izincazelo zakho eziningi zemisipha.
(6) Kuyinamandla kakhulu futhi ingaqhathaniswa nokugcwala kwe-2 kuya kwe-3 ngomlomo we-steroids ngomlomo ngesikhathi esisodwa. Ngakho-ke, ngisho nokusetshenziswa kwayo ngamanani amancane kuholela ekukhuleni okukhulu emisipha kanye namandla.
Thenga i-Methyltrienolone powder kusuka ku-Buyaas.com
I-trenbolone ewuthuli (10161-33-8)
I-trenbolone ephezulu ye-Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (i-Parabolan) powder (23454-33-3)
I-trenbolone e-Enanthate powder emifushane (10161-35-8)
I-trenbolone e-Acetate powder emifushane (10161-34-9)